दिनभर भोकै, रातमा अनिदो : ग्यास्ट्रिकले उम्मेदवार लखतरान !
सिन्धुलीको गोलाञ्जोर गाउँपालिकामा माओवादी केन्द्रबाट उपाध्यक्षका उम्मेदवार ज्वालाप्रसाद न्यौपाने बुधवार खुर्कोटस्थित एक होटलमा खाना खान पसेका थिए । मध्याह्न साढे १२ बजे हात धोएर टेबलमा बसेका थिए । पस्किएको खाना ट...
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा ६ कर्मचारीको बढुवा सिफारिस [नामावलीसहित]
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ६ कर्मचारीहरूलाई बढुवा सिफारिस गरेको छ । बढुवा समितिको सचिवालयले उनीहरूलाई नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, सर्भे समूह, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी, नापी अधिकृत पद...
३६ डीएसपीहरूको सरुवा, को–कहाँ पुगे ? [सूचीसहित]
प्रहरी प्रधान कार्यालयले ३६ जना प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) हरूको सरुवा गरेको छ । सोमवार प्रधान कार्यालयले उनीहरूलाई सरुवा गरेको हो । प्रहरी महानिरीक्षकको सोमवारको निर्णयअनुसार उनीहरूको सरुवा गर...
स्थानीय तहका ५३५ जना कर्मचारीहरूको सरुवा, को–कहाँ ? [सूचीसहित )
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा कार्यरत रहेका ५३५ जना कर्मचारीहरूको सरुवा गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा २०७८ चैत्र ११ गतेसम्म अन्तर स्थानीय तह सरुवाका ला...
सिभिल इन्जिनियरिङ समूह अन्तर्गत ११ जनालाई उपसचिवमा बढुवा सिफारिस, को–को समेटिए ? [सूचीसहित]
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल इन्जिनियरिङ समूह अन्तर्गत विभिन्न उपसमूहका रा.प. द्वितीय श्रेणी [उपसचिव] पदमा विभिन्न शाखा अधिकृतलाई बढुवा सिफारिस गरेको छ । म...
१६ शाखा अधिकृत उपसचिवमा बढुवा सिफारिस, को–को समेटिए ? [सूचीसहित]
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १६ शाखा अधिकृतलाई उपसचिवमा बढुवा सिफारिस गरेको छ । मन्त्रालयले बिहीवारको बढुवा समितिको निर्णयअनुसार लेखा तथा राजश्व समूहको उपसचिवमा उनीहरुलाई बढुवा सिफा...
८ जना सचिवहरूको सरुवा, को कहाँ पठाइए ?
मन्त्रीपरिषदको बैठकबाट ८ जना सचिवहरूको सरुवा गरिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको अतिरिक्तमा रहेका मधुसूदन बुर्लाकोटीलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ भने सार्वजनिक खरिद अनुग...
३० शाखा अधिकृत उपसचिवमा बढुवा सिफारिस, को–को समेटिए ? [सूचीसहित]
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ३० जना शाखा अधिकृतलाई उप सचिवमा बढुवा सिफारिस गरेको छ । कार्यक्षमताको आधारमा उनीहरूको बढुवा सिफारिस गरिएको मन्त्रालयको बढुवा समितिको सचिवालयले जनाएको छ । ...
लोकसेवा आयोगले नायव सुब्बा पदमा विज्ञापन खुलाएको छ । राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक) नायव सुब्बा वा सो सरहका पदहरूमा खुला तथा समावेशीतर्फ विज्ञापन खुलाएको हो । न्यूनतम योग्यता पुगेक...
२१७ उपसचिव पदमा बढुवाका लागि एक हजार ३०२ जनाको आवेदन, एक सातापछि नतिजा आउने
२१७ जना उपसचिवमा बढुवा गर्नका लागि एक हजार ३०२ जना शाखा अधिकृतले दरखास्त दिएका छन् । लोक सेवा आयोगले विभिन्न सेवा समूह, उपसमूहअन्तर्गत ४६ वटा समूहमा बढुवा खुलाएको थियो । ज्येष्ठताको आधारमा २४ र कार्यक्...
शाखा अधिकृतको नतिजा सार्वजनिक, क–कसको निस्कियो नाम ? (नामावलीसहित)
लोक सेवा आयोगले न्याय सेवा तर्फको शाखा अधिकृत पदको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । समावेशी प्रावधानअनुसार शाखा अधिकृतका लागि दरखास्त आह्वान भएकोमा लिखित परीक्षा, अन्तर्वार्ता, सामूहिक परीक्षण, सूचना प्रविधि सीप परीक्...
लोकसेवा आयोगको सूचना : लिखित परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक, अन्तर्वार्ताका लागि बोलाइयो [सूचनासहित]
लोकसेवा आयोगले विभिन्न विज्ञापन नम्बर, सेवा, समूह, उपसमूह र पदको लिखित परीक्षामा सहभागीहरुको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले बुधबार गोरखापत्रमा निकालेको सूचनाअनुसार सफल उम्मेदवारलाई अन्तरवार्ताका लागि बोला...